Ikhandlela elinuka kamnandi, Isiphatho seKhandlela, ikhandlela iWax-Winby
Candle Manufacturing Candle Kangangeminyaka engama-20
Ukuxhasa umgangatho ophezulu ngexabiso lokhuphiswano sisiqinisekiso
ubudlelwane bethu elide intsebenziswano.
Amakhandlela kaWinby anefektri yakhe yokuvelisa lonke uhlobo lwamakhandlela anevumba elimnandi. Sinamava atyebileyo, itekhnoloji evuthiweyo kwintengiso yamakhandlela phantse iminyaka engama-20. Kananjalo sineqela leengcali elinikezela ngeyona nkonzo kunye namakhandlela kubathengi bethu abavela kwihlabathi liphela.
Sinamava amnandi eshishini kwezi mveliso zilandelayo: Amakhandlela eglasi anuka kamnandi, izibane zeti, amakhandlela eNtsika, amakhandlela eVoti, abaphethe ikhandlela, imisonto kunye nezinye izinto eziluhlaza zamakhandlela.
Sinento uyilo lwethu kunye nokuphuhlisa isebe, kwaye singakwazi ukubonelela OEM kunye ODM inkonzo kubathengi.
Iibatik zebhandlela zizinzile kwaye zinobuhlobo kwindalo.
Amakha athandwayo kunye nemibala emihle iyafumaneka.
Siyakholelwa ukuba umgangatho weemveliso kunye nenkonzo ngumphefumlo weshishini
ukunceda abathengi ukugcina uhlahlo lwabiwo-mali kunye nexesha.
Sinefektri yethu ukuvelisa amakhandlela anevumba elimnandi.Kukho amakhulu eendlela ezahlukeneyo zamakhandlela anevumba elimnandi.
Kwizinto eziluhlaza, sisebenzisa iparafini, isoya, ifeksi kunye nezinye izityalo kumakhandlela ethu.
Kwivumba elimnandi sisebenzisa ngaphezulu kwe-100 yeentlobo zevumba elikhethiweyo kumakhandlela anevumba elimnandi.
Ihowuliseyili Customized Luxury Soy Wax Candled Candy
I-chakra ehlobisayo enamakhandlela e-soy anezikhalo ...
Amakhandlela ephathekayo anePhunga elimnandi kunye nendalo ...
Ikhandlela le-Soy wax mason yeglasi ekhanyayo
Iglasi ye-Soy wax ikhandlela elimnandi
Ikhandlela yobugcisa GY01 ...
Ihowuliseyili Candle ikhandlela
Candle Candle ikhandlela
matte frosted siko Glass reed diffuser ikhandlela ...
Ukuhonjiswa kwasekhaya kweNdawo yeoyile yeWay Cube Me ...
Frosted iglasi matte iingqayi ikhandlela ezingenanto
Uhlobo lweSoy wax yankee amakhandlela anevumba elimnandi
Ikhandlela le-Soy wax kunye nomqhaphu wick-luhlaza / mhlophe
Hlala ubukele uHlaziyo
07 / Februwari
Emva kwexesha elide lophuhliso kushishino lwekhandlela, thina ikhandlela likaWinby liqokelele abathengi abaninzi kwaye lifumana indumiso ephezulu evela kumazwe amaninzi. Ezi zilandelayo ...
20 / Februwari
Siye sabamba indibano yethu yonyaka kwiveki ephelileyo, ibingumzuzu onika umdla, wonke umntu asawukhumbula. Ibhodi yangasemva eyilelwe ngokukodwa intlanganiso yonyaka. Yonke ...
Inkampani yamakhandlela kaWinby yinkampani yobungcali yokuvelisa amakhandlela anevumba elimnandi, iingqayi zamakhandlela, ikhandlela leentsika kunye nekhandlela lobugcisa. Siye bathatha inxaxheba Canton Fair iminyaka emininzi ...